Xa Chinese Unyaka Omtsha 2017 - Yintoni i 2017 Animal woNyaka? Xa Chinese Unyaka Omtsha 2017 - Yintoni i 2017 Animal woNyaka?
Xa Chinese Unyaka Omtsha 2017 – Yintoni i 2017 Animal woNyaka?
Chinese New Year is usually celebrated after a month from the original new year and it is one of the widely celebrated festivals across China. If you’re still wondering about Xa Chinese Unyaka Omtsha 2017..ulapha kwindawo ekunene.
Njani Chinese ukubhiyozela Chinese Unyaka Omtsha 2017?
IsiTshayina kuba okudibana intsapho nabahlobo phezu idinala ukuqala yombhiyozo Chinese Unyaka Omtsha ngale ndlela. Kwimibhiyozo Chinese Unyaka Omtsha ityebile kwaye ngamatshamba.
izipho ezininzi exchange phezu 2017 yaseTshayina konyaka omtsha unqwenela omnye nomnye kunye iintsikelelo yonyaka ezayo.
Kutheni Chinese Year New ibhiyozelwa?
The Chinese Unyaka Elitsha lwabhiyozelwa ngamafama Chinese ukuphawula ekuqaleni izityalo ezitsha unqwenela ukuba isivuno esihle ngexesha. Isithethe sele iyaqhubeka ukususela kwiminyaka kunye uyenziwa kuthunyelwa isizukulwana sangoku kunye Chinese imibhiyozo konyaka omtsha ukufumana grand qho ngonyaka.
Qho ngonyaka, Chinese kunyaka omtsha isilwanyana ezinxulumene nayo. Unyaka omtsha wamatshayina 2017 Animal na Rooster kukuthi. intaka nemazi.
Unyaka omtsha wamatshayina 2017 isilwanyana: umqhagi
Unyaka omtsha wamatshayina 2018 isilwanyana: inja
Xa Chinese Unyaka Omtsha 2017?
Unyaka omtsha wamatshayina 2017 umhla: 28th January, 2017
Siyathemba ukuba eli waphendula umbuzo wakho, nini na IsiTshayina nyaka omtsha 2017.
Yintoni Chinese ntoni Chinese Year New 2017?
Gift Red iimvulophu Ithamsanqa kubahlobo
Isipho Chinese ezintle iimvulophu ebomvu njengezipho Chinese abatsha ngonyaka ukuba unqwenela nentlahla abahlobo wayaneka ulonwabo. I-budlelwane luqiniswe ngakumbi isidlo kunye.
Ukuhombisa izakhiwo kunye nombala Red
Izakhiwo bahombisa ngeetshathi ezibomvu, iminqwazi ebomvu kwaye zonke izinto zokuhombisa ngombala obomvu ukubhiyozela biet kunyaka omtsha 2017. ukhuphiswano ezahlukeneyo zibanjwa.
caphukisayo ukuba badubule – Chinese Happy New Year 2017
njani umntu kubhiyozela unyaka omtsha ngaphandle engena crackers. The Chinese ndiziqhawule badubule kubhiyozela unyaka omtsha. Isibhakabhaka ipeyintiweyo abomvu kunye badubule ndiwanyikimise zangaphambili ubusuku. Kwimibhiyozo zinkulu nesihlwele enkulu Ikubuthe ngeenxa iingongoma ezibalulekileyo mzi ukubhiyozela le ocassion ezukileyo.
Thandazani Chinese neyama biet kwi Chinese Year New 2017.
Siyathemba ukuba bafumana inqaku zethu Kuyamangalisa kwaye liya kwabelana oku abahlobo bakho kunye nosapho. Thina ke ngoku ithemba nguwe ecacileyo kunye Xa Chinese Unyaka Omtsha 2017 kwaye Chinese Unyaka Omtsha 2017 isilwanyana?